नेकपाका तल्ला कमिटीको एकतामा विवादै विवाद
कृष्ण गिरी २५ भाद्र ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको असोज ३ गते चार महिना पुरा हुँदैछ । दुई पार्टी एकता घोषणा गर्दा जति सहज भएको थियो अहिले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनवर्गीय संगठन र पार्टीका तत्ला कमिटीमा एकता गर्न सहज भएको छैन ।
क्याडर बेसबाट मास बेसमा आएको नेकपालाई अहिले एकता धेरै समस्या बनेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा जसरी दुई जना अध्यक्ष मिलेर भागबण्डा गरे त्यति सहज जनवर्गीय संगठन र पार्टीको तल्लो कमिटीमा भएन ।
कार्यदल बनाएर एकताको लागि कार्यपत्र बनाउन पार्टी सचिवालयले निर्देशन दियो । यसको म्याद भदौ ५ गतेसम्म थियो । तर प्रदेश नं १ र २ ले समयमा प्रतिवेदन नै बुझाउन नसकेपछि त्यसको म्याद पुनः थपियो । तर अहिलेसम्म पनि १ र २ नं प्रदेशको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने सुरसार गरेको छैन ।
नेकपामा भौगोलिक हिसाबले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ४ विशेष जिल्ला र २२ जनवर्गीय संगठन छन् । प्रायः सबै कार्यदलले आ–आफ्नै गुटका मानिसलाई मात्र नेतृत्वमा सिफारिस गरेको भनेर समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएका छन् पार्टी केन्द्रीय कार्यलय धुम्बाराहीमा । प्रतिवेदन बुझाउने जिल्लामा काठमाडौं लगायतका अन्य सात जिल्ला छन् ।
जिल्ला जिल्लामा मात्र होइन प्रदेश सभा सदस्यमा पनि विवादका कारण भदौमा हुने भनेको नेकपाको एकता कहिले हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । विवाद पूर्व माओवादी केन्द्रमा पनि छ तर बढी विवाद पूर्व एमालेमा छ । पूर्व एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्ष र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली समुह छ । ओली समुहले आफुहरुलाई प्रदेश र जिल्लामा पक्षपात गरेको भन्दै उजुरी र समानान्तर समितिका प्रतिवेदन सहित नामावली पार्टी कार्यलयमा महासचिवलाई बुझाउने नेपाल पक्षधरहरुको संख्या बढ्दो संख्यामा छ ।
प्रदेश नं १ ले आफ्नो प्रतिवेदन महासचिवलाई बुझाएको कार्यदलका सदस्य सावित्रीकुमार काफ्लेले बताए । उनले जनतापाटीसँग भने, सामान्य विवाद छ तर हाम्रो प्रदेशमा समानान्तर समिति बनाउने गरि असहमति कसैको छैन । आज बसेर हामीहरु बाँकी रहेका कामहरु पनि सक्छाैं ।
प्रदेश नं २ को कार्यदलले भने अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन । कार्यदलका सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, तीन चार दिनमा हामीहरु प्रतिवेदन बुझाउँछौ । अहिले छलफलमा छौं ।
प्रदेश २ कै कार्यदलका अर्का सदस्य विश्वनाथ शाहले भने, नयाँ कमिटी बन्ने भएकाले धेरै मानिस आकांक्षी हुनु स्वभाविक हो । त्यही भएर हाम्रो प्रदेशमा प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो । यही २५ गते प्रतिवेदन बुझाउने छाैं । जिल्ला र प्रदेशको कमिटीका लागि सदस्यको छनौट गर्न सहज पनि अलि थिएन ।
प्रदेश नं ३ मा पनि संस्थापन पक्षले एकलौटी रुपमा आफ्नो खुशीले प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व र सदस्यहरुको नामावली पठाएको भनेर असन्तुष्टी बढेको छ । काठमाडौं जिल्लाले त ओली पक्षले एकलौटी नेतृत्वमा सिफारिस गरेको भनेर नेपाल समुहले सागर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यलयमा प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । जबकी कार्यदलले रामशरण ढुङगानालाई अध्यक्ष बनाउने सिफासिस गरेको एक पूर्व एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने कार्यदलले कार्यकर्तामाथि न्याय नगर्दा समानान्तर कमिटीको अवस्था आएको हो । कसैसंग सरसल्लाह नगर्ने छलफल नगर्ने अनि कसरी हुन्छ ?
गण्डकी प्रदेशमा पनि पूर्व एमालेको संस्थापन पक्षले एकलौटी रुपमा आफु पक्षहरुको मात्र नाम सिफारिस गरेको भन्दै केही जिल्लामा समानान्तर समितिको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ओली पक्षले अन्य नेता कार्यकर्तालाई कमिटीमा राख्न नै चाहँदैनन् । उनीहरु आफु मात्र नेता हुँ भन्ने भ्रममा छन् । उनको भ्रम र अन्याय जब सकिदैन तबसम्म इमान्दार र फिल्डमा काम गर्ने कार्यकर्ताले ठाउँ पाउँदैनन् ।
प्रदेश नं ५ मा त विवाद सडकमै आएको छ । पूर्व एमालेले नेतृत्व गर्ने भनेका जिल्लाहरुमा ओली पक्ष अथवा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले एकलौटी मात्र होइन आफ्ना नातेदारलाई जिल्लाको नेतृत्वमा सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको छ । यो प्रदेशमा १२ मध्य पूर्व एमालेले ७ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ । दाङमा पोख्रेलले आफ्ना बहिनी ज्वाइ शिवकुमार आचार्यलाई अध्यक्षको लागि सिफारिस गरेका छन् । जब कि पूर्वअध्यक्ष टीकाराम खड्का अहिले पनि कुनै निर्वाचित पदमा छैनन् । खडका नेपाल समुहको भएका कारण नै उनको ठाउँमा जिल्ला समितिका सदस्य मात्र रहेका शिवकुमार आचार्यलाई सिफारिस गरेका छन् ।
नवलपरासीमा पनि नेपाल समुहका सिनियर नेतालाई पन्छाएर पोख्रेलले आफु निकटलाई सिफारिस गरेका छन् । ५ नं प्रदेशका एक जना केन्द्रीय सदस्यले भने नेपाल समुहका अध्यक्ष रहेका जिल्लामा नै पोख्रेलले आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिस गरेका छन् । निर्वाचित र सिनियर नेताहरुलाई पन्छाएर एकलौटी सिफारिस गरेर गुटको पार्टी बनाउन थालेका छन् । दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी , रोल्पा र पाल्पामा नेपाल समुहका नेताहरु अध्यक्ष थिए । अहिले उनीहरुसंग सल्लाह नै नगरी एकलौटी उनीहरुको ठाउँमा पोख्रलले अरुलाई नै जिल्ला नेतृत्वमा सिफारिस गरेपछि सबै जिल्लामा समानान्तर समिति बनाउने तयारी चलेको नेपाल समुहका एक नेताले बतए ।
रुपन्देहीबाट गोपाल भट्राई, बर्दियाबाट पूर्ण शर्मा, अर्घाखाँचीबाट पिताम्बर भुसाल, पाल्पाबाट राधाकृष्ण कँडेल सिफारीस भएका छन् । ती जिल्लामा सहमति र छलफल गरेर होइन एकलौटी भएको नेपाल समुहको आरोप छ । त्यस्तै गुल्मीबाट बाला काउछा जिल्ला अध्यक्षको लागि सिफारिस भएका छन् ।
यो प्रदेशको कार्यदलमा शंकर पोख्रेल, दलबहादुर राना दुबै ओली पक्षका हुन । केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने ‘अहिले सचिवालयले भनेको जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्जको सल्लाहमा अध्यक्ष छनौट गर्ने भनेको छ तर कार्यदलले हामीसंग छलफल नै नगरिकन आ–आफ्ना नातेदारलाई सिफारिस गरे । यो हामीलाई मान्य हुँदैन । दाङको हकमा म एमालेको इन्चार्ज थिए । त्यहाँ अध्यक्ष टीकाराम खड्का नै हुनुपर्छ’ । चौधरीले भने, यो एक जिल्लामा मात्र होइन ७ वटै जिल्लामा एकलौटी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका पनि धेरै जिल्लामा विवाद भएको छ । यहाँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले दुबैबीच विवाद छ । माओवादीमा दैलेखमा विवाद रहेको दैलेखका पूर्वमाओवादी नेताले बताए । दैलेख छोडेर बाँके गएर बसेका एक जना नेतालाई ल्याएर माओवादीको भागमा परेको सचिव दिन खोजेको भन्दै जिल्लाका नेताहरु आक्रोशित भएका छन् । सचिव बनाउन खोजेका नेता केही वर्ष अघि नै दैलेख छोडेर बाँके बसाइ सरेका हुन । उनी हाल कोहलपुर खानेपानी समितिका सचिव छन् । मुगु र कालीकोटमा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीेले नेतृत्वमा दाबी गरेपछि झन विवाद बढेको छ । जुम्ला र कालिकोटमा समानान्तर समिति बनाउने तयारी भएको एक नेताले बताए ।
७ नं प्रदेशमा पनि विवाद कम छैन । यहाँ त जिल्ला र प्रदेशमा मात्र होइन प्रदेशको नेतृत्वमा नै विवाद रहेको एक जना केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने यहाँ कार्यदलले नै नेतृत्वको लागि आफ्नो नाम सिफारिस गरेपछि विवाद बढेको हो । कार्यदलमा पूर्व एमालेबाट भीम रावल र कर्ण थापा तथा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट लेखराज भट्ट र लक्ष्मी जोशी कार्यदलमा छन् । तर माओवादीबाट सिनियर नेता खगराज भट्ट कार्यदलमा नभएको कारण नै नेतृत्वको लागि सिफारिसमा परेका छैनन् ।
जबकी प्रदेशको नेतृत्वमा एमाले र प्रदेश अध्यक्षमा माओवादीको भाग परेको छ । प्रदेश नेतृत्व अथवा इन्चार्ज भीम रावल भए अध्यक्षमा स्वतः खगराज भट्टले पाउने हुन्छ । तर कार्यदलका नेताहरु मिलेर आफ्नै नाम सिफारिस गरेका छन् । यदि सिफारिस गरेको आधारमा नै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व दिए यहाँ प्रदेश र जिल्लामा समानान्तर समिति बन्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
यति विवाद हुँदा पनि ७७ जिल्लामा दुई तीन जिल्ला बाहेक महिलाको नाम नेतृत्वमा सिफारिस भएको छैन । डडेल्धुरामा मन्जु बमको नाम सिफारिस भएको छ भने तनहुँबाट भगवती न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ ।
सात प्रदेशका कार्यदल सदस्यहरु
१ नं प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट भीम आचार्य,शेरधन राई,पूर्व माओवादीबाट राम कार्की र सावित्रीकुमार काफ्ले छन् ।
२ नं प्रदेशमा पूर्व एमालेबाटसत्यनारायण मण्डल,नागेन्द्र चौधरी,पूर्वमाओवादीबाटविश्वनाथ शाह र प्रमु साह छन् ।
३ नं प्रदेशबाट पूर्व एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, काशीनाथ अधिकारी पूर्वमाओवादीबाट अग्नि सापकोटा र नारायण दाहल छन् ।
गण्डकि प्रदेशबाट पूर्व एमालेबाट किरण गुरुङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ,पूर्व माओवादीबाट हितराज पाण्डे र हरि अधिकारी छन् ।
५ नं प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट शंकर पोख्रेल, दलबहादुर राना, पूर्व माओवादीबाट मणि थापा र गणेशमान पुन छन् ।
६ न. प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट युवराज ज्ञवाली र यमलाल कँडेल पूर्व माओवादीबाट जर्नादन शर्मा र मायाप्रसाद शर्मा छन् ।
७ नं प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट भीम रावल र कर्ण थापा, पूर्व माओवादी केन्द्रबाट लेखराज भट्ट र लक्ष्मीदत्त जोशी रहेका छन् ।
दुबै पार्टीका भातृ संगठन विद्यार्थी र युवाहरुमा पनि आ आफ्नै दाबीका कारण एकता ढीला भएको छ ।
विद्यार्थीमा पूर्व एमालेबाट ५ जनाको अध्यक्षमा दाबी रहेको छ । यता माओवादीबाट भने एकलौटी रुपमा रन्जित तामाङ छन् । अन्त्यमा तामाङ र ऐन महर मध्य एकजनाले नेतृत्व पाउने संभावना रहेको छ ।
युवामा पनि नेतृत्वको निक्र्यौल भएको छैन । युवामा नाम र झण्डामा पनि विवाद रहेको छ । युवाको नेतृत्व, नाम र झण्डामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले बढी चासो लिएका कारण झन् विवाद बढेको एक कार्यदलका सदस्यले बताए । ओलीले नाम र झण्डा युवा संघकै हुनुपर्ने भनेपछि विवाद बढेको ती सदस्यले बताए ।
विराटनगरमा विप्लप बन्दको आंशिक प्रभाव